Frp oo Donald Trump u soo sharaxday in la siiyo biladda nabadda ee Nopelka
Donald Trump (bidix) iyo Kim Jong-un intii lagu gudaha jiray shirkoodii Singapore. Foto: Foto: Evan Vucci / AP / (NTB scanpix)
Oversetter: Ali Dini Gedi
Maxaa dbacaya ayey qabaan haddii la siiyo biladan...
Isha warka: NTB
Christian Tybring-Gjedde iyo Per-Willy Amundsen oo ka tirsan xisbiga Frp ayaa soo jeediyey in madaxweynaha maraykanka Donald Trump la siiyo biladda nabadda ee caalamiga ah ee Nopel, iyagoo sabab uga dhigay shirkii madaxeed ee uu dhawaan la yeeshay madaxweynaha Kuuriyadda Waqooyi Kim Jong-un.
– Colaadda Kuuriya waxay ahayd tan ugu daran uguna qatarsan ee Trump uu ka dhaxlay Obama. Trump wuxuu qaaday talaabo weyn oo muhiim ah oo ku aadan dhanka hub ka dhigista iyo nabad kala dhexdhigidda labada kuuriya ayuu yiri Christian Tybring-Gjedde oo madax ka ah kooxda qaabilsan arrimaha dibadda iyo difaaca ee Frp oo u waramayey NTB.
– Marka qofku uu cid u soo sharaxayo biladda nabadda, waxaan qabaa in ay muhiim tahay inuu qofku muujin karo natiijo la taaban karo ee xagga nabadda iyo hub ka dhigista. Dad badan baa isku dayey Trump ka hor si xamaasad leh, howsha maddaxweynaha maraykanka iyo sida uu diiradda u saaray uguna dadaalay waxaan aragnaa rajo dhab ka dhigaysa waqooyiga Kuuriya oo aan lahayn hubka wax gumaada ayuu yiri mar kale.
Amundsen ayaa qaba in haddii madaxweynaha maraykanka loo cayimo biladda nabadda ay taasi sii baritaari karto howshaan cusub laakiin horeyba u socotay.
– Waa muhiim in Trump uu dabagal ku sameeyo shuruudaha saaran Nord-Korea, si loo gaaro ama loo xaqiijiyo hub ka dhista Nuclearka. Waxaan aaminsanahay in biladani kabi karto taageerada caalamiga ah ee qorshahan waqooyiga Kuuriya ayuu yiri mar kale Amundsen.